Hetauda Khabar - जाँदाजाँदै एसपी श्रेष्ठले भने : दुखमन छैन, ...फेरी म जस्तो किन चाहियो नि !
एसपी श्रेष्ठ मकवानपुर आएको ४१ दिनमै उनको सरुवा भएको हो । श्रेष्ठ को प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाण्डौमा अपराध अनुसन्धान ब्युरोमा सरुवा भएको हो । उहाको ठाउँमा बुद्धिराज गुरुङ आउने बताइएको छ । त्यस्तै डिएसपी दिलिपराज झाको पनि सरुवा भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक लोकेन्द्र श्रेष्टले जादाजादै आफु यस जिल्लामा आएर ४१ दिन सम्म गरेको कामको प्रगति विवरण पनि सार्बजनिक गरे । ४१ दिन सम्म मकवानपुरका अपराध नियन्त्रण गर्ने देखि गाँजा र चरेश नियन्त्रण गर्ने काममा आफु सफल भएको उनले बताए । आफ्नो यो अबधिमा कुनैपनि अपराधिले छुट नपाएको उनको दावी छ । आफ्नो जहाँ सरुवा गरेपनि अपराध र अपराधिसंग कुनै पनि हालतमा नझुक्ने र कानुनी सासन कायम गर्नकालागि यस जिल्लामा आफुले ड्युटी मात्र गरेको एसपी श्रेष्टको भनाइ छ ।
सरुवा एउटा नियमित प्रकृया भएको बताउँदै उनले भने, मैले सबै राम्रा कामको सुरुवात प्रहरीबाटनै गरेको हुँ र आफैबाट पनि सुरुवात गरे । ब्यक्तिबादी भन्दा पनि सिस्टममा काम गर्नुपर्छ भन्दा सरुवा भएर मलाई कुनैपनि दुखमन छैन,' । बोल्नमा पनि माहिर एसपीले अरुलाई मोटिभेसन पनि मज्जाले दिन्छन् र जादाजादै पत्रकार सम्मेलनमा उनले यसो भने, 'जादाजादै उसले रिसाएर भनिन, त जस्तोत हजारौ भेट्छु, मैले मुस्कुराउदै भने फेरी म जस्तो किन चाहियो नि ?'
एसपी श्रेष्ठ सामाजिक संजालमा पनि उत्तिकै अपडेट हुन्छन् धर्मकर्म-ध्यान योगा तिरपनी उतिकै रुची राख्नेकुरा उनको फेसबुक हेर्दा अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनि हनुमानको भक्तपनि हुन् । प्राय सवेरै उनले हनुमानको तस्विर आफ्नो वालमा हालिनै रहन्छन् । सायद हनुमानको भक्त भएरहोला अपराध र अपराधिको मामलामा उनले कुनै कम्प्रमाइज गरेनन् झुक्न जानेनन् । उनि मकवानपुर आएदेखि यहाँको शान्ति सुरक्षा देखि प्रहरीले आम सर्वसाधारण संग गर्ने बोलि व्यवहारमा परिवर्तनमात्र आएन, उनले हरेक घण्टा मकवानपुर हुदै निकासी हुने गोरुको अबैध ओसारपसार, लागूऔषध नियन्त्रण, कानुनको दाएरामा नआएका सस्था-उद्योग इत्यादिलाई चेतावनी, चोरीको मोटरसाइकल-मोबाइल, अबैध गाँजा खेति, घरेलु मदिरा नियन्त्रण लागएतका थुप्रै कामहरु गर्न भ्याए ४१ दिनमा ।
त्रेतायुगमा भगवान श्रीरामको सहयोग गर्न र दुष्टको नाश गर्न भगवान शिवले हनुमानलाई अवतार थिएका थिए । रावणलाई पराजय गर्न हनुमानले मुख्य भूमिका निभाए । यहाँ एसपी श्रेष्ठले पनि ४१ दिनमा मकवानपुरकालागि यस्तै भूमिका निभाउन सफल भए भन्दा कुनै फरक नपर्ला । सबैभन्दा ठुलो कुरो त यहाँका अबैध क्रसर उद्योगलाई एक्लो प्रयासमा बन्द गराए एसपी श्रेष्ठले । यहाँको क्रसर बन्द गराउन सक्नु चानचुने कुरा थिएन । त्रेतायुगमा रामकी पत्नी सीतालाई खोज्ने क्रममा अंगद, जामवंतजस्ता वीरहरुले समुन्द्र पार गर्न नसकेजस्तै मुस्किल परेको थ्यो यहाँका अबैध क्रसर बन्द गर्न यहाका प्रसाशनलाई । हुनत यहाका प्रसाशनकै मिलेमतोमा अबैध धन्दा चलेको कुरापनि सबैलाई थाहानै छ, तर पनि यसकाममा सीताको खोजका क्रममा हनुमानले १०० योजन लामो समुन्द्र पार गरे जस्तै गरि एसपी सफल भए क्रसर बन्द गराएरै छाडे । यहाँका अबैध इन्स्टिच्युट र कन्सल्टेन्सीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास गर्दै थिए, ब्युटिपार्लर,होस्टेल,होटल सबै ठाउमा उनले अर्जुन दृष्टि लगाएका थिए । यतिमात्र हैन लागुपदार्थ दुर्व्यसनी र घरेलु हिँसा सम्बन्धि जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न पनि अब्बल थिए श्रेष्ठ ।
तर उनको ४१ दिनमै सरुवाले विभिन्न टिका-टिप्पणीहरु आउन थालेका छन् । सामाजिक संजालमा उनको सरुवाप्रति आलोचना भैरहेको छ । जे होस् ४१ दिनमा उनले यसभन्दा अगाडी १ बर्षमा पनि गर्न नसकेका काम गरेका छन् । बिकास बिरोधि, अपराधि र अबैध धन्दा संचालन गर्नेका लागि एसपी श्रेष्ठको सरुवा खुसीको कुरो बनेपनि यो ४१ दिनमा एसपी श्रेष्ठले गरेकाकामलाई सबैले तारिफ गरेका छन् ।